आयस्रोत अनुसार कुन जीवन बीमा प्रडक्ट छनौट गर्ने ? यस्ता छन् बीमाका प्रकार – Insurance Khabar
प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७७, बुधबार ०७:३५
काठमाडौं । दशैंमा केही रकम बचाउन सकिन्छ । एकातिर कार्यालयबाट आएको दशैंको बोनश, अर्कोतिर टिका थाप्दा मान्यजनबाट पाएको दक्षिणाबाट बचेको रकमलाई के गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने जीवन बीमा गर्न सक्नुहुन्छ । तर जीवन बीमा गर्ने भनेर मात्रै हुँदैन । आफ्नो आय क्षमता, दैनिक रुपमा आईपर्ने खर्चको संयोजन मिलाएर बीमा गरेमा मात्रै भविष्यमा नियमित बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने गरी जीवन बीमा गर्नुपर्दछ । दशैंमा हुने अतिरिक्त आयलाई बीमाको रुपमा उपयोग गर्न सकिने हुँदा यसबारे समेत हिसाब किताब गरेर बीमा गर्नुपर्दछ ।
अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने बीमाको महत्व छुट्टै रहेको छ । तर नेपालमा बीमाको पहु्ँच बढाउन नसकेको कारण अझै यस बिषयलाई अनिवार्य बनाउन सकेको छैन। विदेशतिर बच्चा जन्मने बित्तिकै अनिवार्य बीमा गर्नुपर्छ।
नेपालमा भने न्युन आय, जनचेतनाको कमी लगायत कारणले बीमाको संस्कृती अझै फैलिन नसकेको बीमा विज्ञ भोजराज शर्मा बताँउछन् । राष्ट्रिय पर्वहरुमा प्राप्त हुने आयको उपयोग गर्ने विषयमा बहस हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बीमा बिज्ञ शर्मा बताउँछन् । प्रतिव्यक्ति आयको आधारले पनि यसले फरक पार्न सक्ने बीमाबिज्ञ शर्माको भनाई छ ।
बीमा बचत पश्चात्को रकम जोर्गान गरेपश्चात् भविष्यको जोखिम न्यूनिकरणको एक पाटो हो भने नियमित बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने हुनु अर्को पाटो हो । व्यक्तिको आम्दानी कति छ, उसको खर्च त्यसपश्चात् बचतको बाटो खुल्ला हुने हो । यदि खर्च र बचत गर्न नै धौ–धौ छ भने बीमालाई उसले अवलम्बन गर्न सक्दैन त्यसैले बीमा गर्दा बीमितको आयस्रोतलाई समेत ध्यान दिनुपर्दछ ।
कसरी छनोट गर्ने जीवन बीमा प्रडक्ट ? कति प्रकारको हुन्छन् ?
बीमा गर्न उमेरले छेक्दैन। बच्चा जन्मेकै दिन उस्को बीमा गर्न सकिन्छ। घर परिवारको मध्ये एक जना संरक्षक रहेर बच्चाको बीमा गर्न सकिन्छ। ६५ वर्ष भन्दा माथिका बृद्धको भने जीवन बीमा गर्ने प्रावधान रहेको छैन ।
प्रत्येक जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफनो बीमा पोलिसीको बारेमा विस्तृत जानकारी आफनो वेवसाईटमा राखेको हुन्छ । अर्भिकताले नै कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति पनि छैन । अभिकर्तामार्फत वा सिधैं आफै बीमा कम्पनीको कार्यालयमा गएर समेत जीवन बीमा पोलिसी खरिद गर्न पाउनेछन्।
कम्पनीहरुले उमेर हद पनि तोकेको हुन्छ, प्रत्येक बीमालेखमा र रक्षारण हुने र नहुने कुरा पनि स्पष्ट रुपमा राखिदिएको हुन्छ । त्यसैले, आफूले छनोट गर्न लागेको बीमा पोलिसीको बारेमा गहन अध्ययन गर्नु जरुरी छ । जीवन बीमाले आर्थिक सुरक्षा, लगानी तथा बचतको अवसर दिनुका साथै पूजी निमार्ण, करमा छुट जस्ता महत्वपूर्ण फाईदाहरु प्रदान गर्छ । जीवन बीमामा आजिवन बीमा, सावधिक बीमा, म्यादी बीमा, एन्युटी बीमा रहेको हुन्छ ।
नेपालमा जीवन बीमा गर्ने १९ वटा कम्पनी छन् । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान र निजी क्षेत्रका १८ कम्पनीले यो सेवा प्रदान गर्छन्।
निजी क्षेत्रका कम्पनीमा नेशनल लाइफ, नेपाल लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, मेटलाइफ एलिको, एशियन लाइफ, प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, आइएमई लाइफ, यूनियन लाइफ, ज्योति लाइफ, सन नेपाल लाइफ, रिलयान्स लाइफ, रिलायबल लाइफ, सिटिजन लाइफ, सानिमा लाइफ,प्रभु लाइफ, महालक्ष्मी लाइफ रहेका छन्।
नेपाल सरकारले बिशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका जनताले पनि बीमाको सुविधा पाओस् भन्ने हेतुले यस कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको हो ।
जसमा निम्न आय भएकाहरुले बीमा गर्न सक्नेछन् ।
बीमा प्रडक्टको छनोट
बजारमा बीमा रकमको केही अंश आवधिक रूपमा फिर्ता गर्नेदेखि वार्षिक फिर्ता गर्ने बीमालेखहरू छन् । २५ वर्षका व्यक्तिका लागि वार्षिक रूपमा रकम फिर्ता गर्ने २० वर्षे सात लाख बीमा अग्रिम भुक्तानी बीमालेखमा बीमा अवधि समाप्त नहुँदै बीमितको मृत्यु भएमा अग्रिम रूपमा भुक्तानी भएको रकम कट्टा नगरी पूरै बीमा रकम तथा आर्जित बोनस रकम भुक्तानी गरिन्छ । यसरीे कम लगानीमैं परिवारको आर्थिक स्थितिको बचाउ तथा उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । कुनै व्यक्तिको आयस्रोत तथा बचत निश्चित छ, बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न असहज हुँदैन भने सावधिक बीमा गर्न सकिन्छ । २५ वर्षको व्यक्तिले ३० वर्ष सम्म उमेर समूहको मानिस यस बीमा योजनामा सरिक हुन पाउछन् ।
प्रतिफलको आधार बोनस दर
जीवन बीमा कम्पनीहरूले विमितहरूलाई दिने प्रतिफल बोनसदर हो । कम्पनीहरूले वार्षिक प्रतिहजारका दरले बोनस वितरण गर्दछन् ।
कम्पनीहरूले नाफाको आधारमा बोनसदर घोषणा गर्छन् । कम्पनीले आम्दानी गरेको बार्षिक कुल नाफामध्ये ९० प्रतिशत रकम बिमीतहरूलाई वितरण गरिन्छ भने १० प्रतिशत रकम लगानीकर्तालाई वितरण गरिन्छ । यस्तो बोनसदर कम्पनीहरूले आर्थिक बर्ष सकिएपछि वार्षिक रुपमा घोषणा गर्दछन् । त्यसैले जीवन बीमामा बोनस दर निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
कम्पनीहरूले बोनसदर प्रतिहजारका दरले वितरण गर्छन् । यसरी घोषणा गरिएको बोनस विमितको बीमा अवधि सकिएपछि एकमुष्ट रुपमा प्रदान गरिन्छ । कम्पनीको वित्तीय अवस्था र व्यवस्थापकीय अवस्थाका आधारमा बोनसदर निर्धारण हुन्छ । बोनसदरका आधारमा नै विमितले आफनो बीमा योजना समाप्त भएपछि पाउने रकम निर्धारण हुन्छ । धेरै बोनसदर भएका कम्पनीले विमितहरूलाई धेरै रकम फिर्ता गर्दछन् भने थोरै बोनसदर भएका कम्पनीले बीमितलाई थोरै रकम फिर्ता गर्दछन् ।